ANTSIRANANA : Tsy misy mpanamboatra ireo tatatra sy bizo tsentsina eran’ny lalana
Rano maloto mifendraka eran’ny lalana, izay mitondra fofona maimbo, efa tsy resahina intsony ny fisian’ny moka aterak’izany, ireo rehetra ireo no iainan’ny mponina amin’ny toerana maro aty Antsiranana. 20 août 2019
Ahiana araka izany ny hisian’ny valan’aretina. Raha ny ao amin’ny fokontany Tanambao avaratra amin’ny lalana Fianarantsoa sy ny manodidina no resahina dia efa ahitana loto manaraka ny rano maloto mivoaka ety ivelany. Araka ny fantatra dia vokatry ny tsy fisian’ny fanamboarana amin’ireny fantsona mitondra rano maloto avy amin’ny lavapiringa amin’ny sisin-dalana ireny ny antony. Tsentsina koa ny bizo sy tatatra. Tsy takona afenina ny fiparitahan’izany eny amin’ny arabe, izay hita fa miha simba hatrany.
Araka ny voalazan’ireo olona amin’ny manodidina dia efa misy ny fampahafantarana teo anivon’ny kaominina mahakasika izany fa mbola tsy nahitana fandraisana andraikitra, efa an-taonany maro izay. Ankoatra izany dia voalaza fa ireo voakasika izany no ilaina ny hiantoka ny lany rehetra amin’ny fanamboarana. Ny zava-misy anefa dia hita ety ivelan’ny tokotany ny fisian’ny fahatsentsenana. Ny mahatsikaiky anefa dia ahitana mpiasa vitsivitsy ao amin’ny kaominina monina eny amin’ny manodidina ireo toerana ireo. Raha ny aty Antsiranana manokana no asian-teny dia tsy vitsy ireo faritra misedra olana tahaka ireo voalaza eo ambony ireo.
Efa tsy resahina ihany koa izany mandritra ny asara, indrindra amin’ny fisian’ny orana misesy. Tsara homarihina fa tandrify ireny lalana nasiam-panavaozana tafiditra tao anatin’ny tetikasa pic2 ihany koa no nahitana fanamboarana ireo tatatra sy bizo mitondra rano maloto. Ho an’izay tsy maharaka vaovao dia mihevitra fa ny avy amin’ny kaominina ihany no nahavita ny asa fanatsarana. Ny zava-misy dia entin’ny sasany hieboeboana ireny asa tanterahin’ireo avy amin’ny tetikasa ireny.